1. Isipho Kwesinye isikhathi iza ngesilinda eside esingakudida ngasese lokho Uyenza kanjani into yokugoqa isipho esiyisilinda? Namuhla sinendlela yokwakha injabulo ngokuba ngumuphi. Futhi gcwalisa ukwaneliseka okuvela kumamukeli obone ubungcweti nokunakekelwa esinyathelweni ngasinye kusuka esithombeni sokuqala ukusonga wonke umuntu owamukela isipho kulo mkhosi okhethekile. Bona ukunambitheka nokunakekelwa kwethu Futhi, lapho usuqedile, uzozizwa uziqhenya ngokweqile.
2. Izinsiza kusebenza ezazisetshenziswa Ukugoqa isipho sesilinda
3. - Ukugoqwa kwesipho Khetha ukufanisa uhlamvu lomamukeli. Kusetshenziswa imibala namaphethini afanele Kule minyaka kungenzeka ufune iphepha le-fiber yemvelo. Lokho kunikeza umuzwa ofudumele futhi okhethekile, akumangazi Uma liyibhokisi elikhulu le-cylindrical, iphepha elikhethiwe kungadingeka likhulu. Noma sebenzisa iphepha ekuhlanganisweni ndawonye ukwenza ukugoqa okuhle. - Iteyipu yeglu engabonakali nokunamathela okunamacala amabili - Ibhokisi lesilinda Ungayigqoka ngesipho ngosayizi ofanele nje. Noma isikhathi eside Uma kuyibhokisi lesipho elisetshenziselwa ukuhlobisa indawo Bese ukhetha usayizi obekiwe bese ubukeka ugqamile
4. Izinyathelo nokuthi ungasonga kanjani isipho se-cylinder.
5. - Qala kusukela ekulinganiseni iphepha elizungeze ibhokisi lesilinda ukuze lilingane. Zombili izinhlangothi ezibanzi nezide - Songa phezulu nangaphansi ngokulinganayo - Vikela ukuphela kwephepha ngentambo esobala enamathiselwe ebhokisini ezinhlangothini. Futhi unamathele kabili ngakolunye uhlangothi ukuze kungabikho mkhondo. - Fika ezingeni eliphezulu Donsela ukuphela kwephepha phansi Futhi kulungiswe nge-tape esobala. - Zama ukuncenga ekhoneni elifanele Futhi sebenzisa iteyipu esobala ngezikhathi ezithile ukugcina izingxoxo esizibambe phezulu Bajahe kuze kube sekupheleni kombuthano. Futhi wenze izinhlangothi zombili
6. - Sika iphepha libe isiyingi bese ulinamathisela phezulu.
7. - Beka iribhoni phezulu kahle - kwenziwe. Hlola uqedile futhi ulethile
8. Akunzima nge Ungasigoqa kanjani isipho se-cylinder Futhi kunganikeza umamukeli elinye ithemba Ukuma kwebhokisi kubukeka kanjena. Yini oyothola njengesipho? Futhi ekupheleni konyaka Ibhokisi lesipho lesilinda lingahlelwa. Njengokuhlobisa kwasekhaya noma ekhoneni likaKhisimusi Ukuthola ubukhulu bokubukeka kwezimo ezahlukahlukene Faka ubuhle nenjabulo futhi, kulula futhi akunzima.
9. Ukwenza okuthile ngothando nangezinhloso Imiphumela ihlale mihle, mema izingane zakho ukuthi zihlanganyele emsebenzini wokugoqa izipho wabathandekayo bakho. Yize ikhono lingeke liphume lihle kakhulu Kodwa uthando nokunakekelwa Kungumsebenzi omuhle emndenini. Omunye umsebenzi ofudumele ofuna ukuthi uzame !!